Nhau - Art 3D Kudhinda | 3D Kudhinda Inosundira Miganhu Mberi kweArtistic Creation
Kudhinda kweArt 3D | 3D Kudhinda Inosundira Miganhu Mberi kweArtistic Creation
Kudhinda kwe3D kunozvarwa kuunza iyo nyowani, ichigonesa dhizaini uye kugadzira kuti kuitike mune itsva fashoni. Vanyori zvishoma nezvishoma vari kuburitsa kugadzirwa kweiyi tekinoroji-ne-rukoko tekinoroji uye kuita kwakasiyana kwezvinhu zve 3D zvinodhinda kuti uwane zvigadzirwa zvehunyanzvi.
1. Chinja zvisingabviri kuita mamwe mikana
Imwe yemabhenefiti akakurisa ekudhinda kwe3D ndeyekusanduka kunoita kuti kugadziriswa kwemunhu kuitike zvakanyanya zvisinei nekuti magadzirirwo akaomarara sei. Revolutions iri kuitika mune angangoita ese matunhu. 3D yakadhindwa zvinhu zveactuator, ma LED, uye odhiyo mhando dzemidziyo inogona kuiswa mukati mune zvekupedzisira zvigadzirwa, kupfupisa zvakanyanya kugadzirwa kutenderera uye kudzikisa mutengo. Mienzaniso inogona zvakare kuonekwa mumusika wezvishongo. Kudhinda kwe3D kunogona kugadzira zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanyanya. "Chidzitiro cheMweya" naPhilip Beasley chinoratidza humbowo hwe 3D kudhinda kushandura zvisingaite kuita mamwe mikana.
Yakafuridzirwa ne 3D kudhinda tekinoroji, iyo miganho yemafashoni dhizaini haina kupfuura kungoita ekugadzira matekiniki. Mazhinji masisitimu uye maumbirwo akambonetsa kuwana mu2D anogona kuwanikwa kuburikidza neiyo 3D tekinoroji.
2. Beyond saizi miganho
Vanyori vanowanzo dzivirirwa mukugadzirwa uye kuuraya nekuda kwehukuru uye chiyero, kunyangwe vari kugadzira madiki kana makuru mabasa. Nekudaro, kudhinda kwe3D hakuitizve chipingamupinyi. Semuenzaniso, vagadziri vezvishongo vanogadzira zvakaomarara dhizaini pane izvo zvinoitwa nemaoko ekugadzira. Zvese zvinonakidza ruzivo uye zvakapfava mapatani zvese zvinogona kunyatso kuoneswa neiyo 3D purinda.
3. Max kugadzirwa kugona
Dhijitari matekinoroji ari kugadzirisa echinyakare prototyping nzira. Midziyo yakawanda inoshandisa kudhinda kwe3D kugadzira zvigadzirwa zvepakutanga. Kubatsira iko nyore kwekuchengetedza, kuwana, uye kuteedzera dijitari 3D modhi dhizaini, iyo yose yekugadzira maitiro inozadzisa mutengo wakaderera munguva nekudyara. Jewelers uye ceramic artists vanogona kugadzira, prototype, uye kugadzira huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakafanana zvakachipa uye zvine hunyanzvi, zvichibva pane imwechete dhizaini inochengetwa manhamba.
4. Kudzoreredzwa kwehunyanzvi uye kutandara
3D tekinoroji yekudhinda haina kungoshandiswa kugadzira uye kuburitsa mabasa matsva zvachose. Iyo zvakare inogadzirisa nhoroondo dzezvigadzirwa zvaimbove zvisingaite kudzoreredza. Vanodzoreredza hunyanzvi vanoshandisa 3D kuongorora kuti vaongorore zvinhu zvekare zvisati zvadzorerwa, ipapo 3D modhi dhizaini software ichashandiswa kugadzirisa izvo zvisipo nekushandisa chikamu chiripo chechivezi kuti kusimudzira kubudirira kwekugadzirisa kunotevera.
5. Muchinjikwa-muganho uchinyunguduka hari
Kutya Sisitimu inogadzira yakasarudzika art, zvishongo, uye imbawares kuburikidza mash-ups ekombuta sainzi, math, biology, uye kuvaka. Basa ravo rinotora kurudziro kubva kune zvisingaoneki masosi, senge mabhaisikopo maitiro, ayo anobva aiswa mumafomu matsva achishandisa CAD uye oshandurwa kuita maceramics vachishandisa yakasarudzika Ceramic Resin zvinhu.
Yemahara yezvirambidzo zvinoiswa neyakajairika dhizaini uye ekugadzira matekinoroji, kunyangwe avo akajairika masiyomu geometric dhizaini ane maitiro echimiro uye kusimba paakagadzirwa achishandisa 3D purinda. Zvishandiso zvemadhijitari ndiro dombo repakona reprojekiti yavo uye humbowo hwekuti 3D kudhinda inogona kuzivisa iyo ethos yese yehunyanzvi chirongwa pamwe nekukanganisa sarudzo yaro yekugadzira nzira.
Ramangwana re 3D Kudhinda Art
Chave chiri chisingarambike chokwadi kuti 3D kudhinda uye hunyanzvi zvakasanganiswa kugadzira rumwe runako. Kubva kuvadzidzi kuenda kune nyanzvi, vese vatanga kushandisa zvekugadzira kweiyo 3D tekinoroji. Nekuda kwekushandisa kwakakura munzvimbo dzakasiyana siyana senge indasitiri yezvokurapa, kugadzira zvigadzirwa, uye kuvaka, kudhinda kwe3D kunotendera maartist kuti aongorore nzvimbo dzaimbove dzisingambofungidzike kuti dzitsike.
Post nguva: Kubvumbi-07-2021